नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या २५ हजार नाघ्याे-के अब लकडाउन ? - Birgunj Sanjalनेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या २५ हजार नाघ्याे-के अब लकडाउन ? - Birgunj Sanjalनेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या २५ हजार नाघ्याे-के अब लकडाउन ? - Birgunj Sanjal
नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या २५ हजार नाघ्याे-के अब लकडाउन ?
२२ आश्विन २०७७, बिहीबार ०६:५०
वीरगंज | नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या २५ हजार नाघेकाे छ । गएकाे २४ घण्टामा तीन हजार चार सय ३९ जनामा काेराेना भाइरसकाे सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या २५ हजार सात पुगेकाे हाे ।
अहिलेसम्म ९४ हजार दुई सय ५३ जनामा काेराेना सङ्क्रमण भएकाेमा ६८ हजार ६ सय ६८ जना निकाे भएसँगै सक्रिय सङ्क्रमितकाे सङ्ख्या २५ हजार नाघेकाे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुधबार १४ हजार दुई सय नाै जनाकाे पीसीआर परीक्षण गरेकाेमा ३४ सय ३९ जनामा काेराेना पुष्टि भएकाे छ । याे सङ्ख्या दैनिक विवरणमा अहिलेसम्मकै धेरै हाे । यस्तै बुधबार १५ जनाकाे ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेकाे सङ्ख्या पाँच सय ७८ पुगेकाे छ ।